grade Ukutya Carboxymethyl neselulosi Sodium (CMC) - Shanghai shem Ukunyaniseka. Co., Ltd
Sodium Carboxymethyl neselulosi (CMC) yi powder emhlophe okanye bulubhelu oko kukuthi, esha Ekse kunye non-toxic.It uye hygroscopicity eliphezulu kwaye enyibilikayo emanzini ukwenza ulwelo zamafu. It is a electrolyte polyanionic hayi fermented.It uye ubushushu-uzinzo elungileyo .resistance netyuwa impahla bhanya-bokwakha. protein 1.Prevent ngobisi asidi evela nokucutheka, isimo sentlalo kunye wokulaminetha. 2.Due ukuya smooth sugar intlama karhulumente yayo engaqhelekanga emva kokuba iyachithakala, oko kwenza isiselo ukungcamla okulungileyo egudileyo. 3.Its ngisho ...
Sodium Carboxymethyl kwincindi ( CMC ) yi powder emhlophe okanye bulubhelu oko kukuthi, esha Ekse kunye non-toxic.It uye hygroscopicity eliphezulu kwaye enyibilikayo emanzini ukwenza ulwelo zamafu. It is a electrolyte polyanionic hayi fermented.It uye ubushushu-uzinzo elungileyo .resistance netyuwa impahla bhanya-bokwakha.
protein 1.Prevent ngobisi asidi evela nokucutheka, isimo sentlalo kunye wokulaminetha.
2.Due ukuya smooth sugar intlama karhulumente yayo engaqhelekanga emva kokuba iyachithakala, oko kwenza isiselo ukungcamla okulungileyo egudileyo.
evenness 3.Its elungileyo kunye nokumelana asidi inika ukusela uzinzo kakhulu
4.Effectively ukuphucula nokuqhekeka okanye ukusibutyaza of kukubola wavala element olusebenzayo.
Ukucacisa Of CMC
Degree wokumelana (DS)
Viscosity (Ngowe-2% Water
Kloride (Njengoko Cl - ),%
heavy metal (njengoko PB),%
Iron (Fe) ,%
Ityhefu (njengoko As) ,%
Ngokutsho yomsebenzisi ' imfuno s
Okulandelayo: grade Industrial Carboxymethyl neselulosi (CMC)